Somali Youth Development Organization - News: Gianni Infantino oo loo doortay Madaxeynaha cusub ee FIFA
May 21 2018 06:01:23
Gianni Infantino ayaa bedelaya Sepp Blatter oo ay isku wadan ka soo jeedaan isagoonoqonaya Madaxweynaha Fifa.
Infantino oo ahaa xoghayaha guud ee Uefa ayaa helay codad gaaraya 115 isagoo ka horeeyay 27 cod musharixii ka horeeyay Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa.
Prince Ali bin al-Hussein ayaa helay afar cod halka musharaxa kale Jerome Champagne uusan wax cod ah helin wareeggii labaad. Blatter oo hayay xilka madaxtinimada Fifa illaa iyo 1998 ayaa sanadkii hore is casilay waxana markii dambe howlaha Fifa laga joojiyay muddo lix sano ah kadib markii lagu eedeeyay inuu anshaxa ku xadgudbay.
Infantino waa 45jir qareen ah kaasoo ka yimid deegaaka Brig ee gobolka Valais dalka Switzerland taasoo u jirta inkayar lix mile magaalada Visp oo ah magaalada uu ka soo jeedo Blatter. Waxa uu Infantino soo galay tartankan markii ay cadaatay in Michael Platini uusan tartanka ka qeybgali karin.
Doorashada ayaa ahayd in ay ka qeybgalaan illaa shan musharax balse musharaxa ka socday dalka Koofur Afrika Tokyo Sexwale ayaa ka baxay tartankan kahor doorashada oo ka dhacaysay Zurich. Wareegii koowaad ayaan suurtogalin in musharax uu helo codad aqlabiyad ah inkastoo Infantino uu helay 88 cod isagoo saddex cod ka horeeyay musharixii ku soo xigay Sheikh Salman.
Codad gaaraya 104 oo ah 50% codadka ayaa loogaga baahnaa musharaxa ku guuleysanaya doorashada wareegga labaad iyadoo ay codeynayeen 207 xubnood. Waa markii ugu horeysay ee wareeg labaad loo baahdo doorashada madaxtinimada Fifa tan iyo sanadkii 1974kii oo uu Joao Havelange oo u dhashay dalka Brazil ka guuleystey Stanley Rous oo England ka soo jeeday.
· shiikha on 29/02/2016 14:36:50 ·
Render time: 0.02 seconds 2,929,046 unique visits